ALASORA : Sarona ilay mpamily nitsoaka sady mamo nandona moto nanao taingin-telo
Na niezaka nitsoaka aza ilay mpamily nandona olona telo mianaka nitaingina moto, dia tra-tehaky ny teo anivon’ny Polisim-pirenena ihany. 16 octobre 2020
Ny tatitra voaray no nahalalana fa nitrangana lozam-pifamoivoizana teny Alasora, ka voalaza tamin’izany fa telo mianaka nitaingina moto no voafaokan’ny fiara, omaly. Voalaza fa mamo ny mpamily ilay fiara, tamin’io fotoana io. Avy hatrany dia nitsoaka moa ity nahavanon-doza taorian’ny loza mahatsiravina niseho.
Araka ny fanazavana ihany dia raim-pianakaviana no nitondra ny vadiny mitondra vohoka 08 volana sy ny zanany 06 taona tamin’ny môtô, tamin’io fotoana io. Fiara marika Peugeot 309 kosa no nandona azy ireo. Soa fa nisy olona nahatsikaritra ny zava-niseho ary avy hatrany dia nampandre haingana ny Polisy teny amin’ny manodidina.
Nisy fiaran’ireo Polisy nanao fisafoana teny an-toerana moa tamin’io fotoana io, ka tonga dia nanenjika ity mpampily nitsoaka ity. Nifanenjehana hatreny amin’ny lalan’ny By-Pass iny, ka tra-tehaka ihany ny farany ary rehefa tratra dia mbola nahenoana fofon-toaka. Tsy vitan’ny mamo ihany anefa ity farany, fa nandritra ny fanadihadiana natao azy dia mbola nisandoka andraikitra ihany koa izy.
Eo am-pelatanan’ny mpitandro filaminana ny raharaha, ankehitriny. Ireo telo mianaka naratra mafy kosa dia mbola manohy mitsabo tena ao amin’ny Hopitaly Joseph Ravoahangy Andrianavalona hatreto.